Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo - Seattle Traffic
Galbeedka Seattle Barnaamijka Xulashada Safarka
Waa maxay hadafyada ugu muhiimsan ee Barnaamijka Xulashada safarka ee Buundada Galbeedka Seattle?
Fududeeyo saamaynta taraafikada ee xidhidhiyaha buundada galbeedka Seattle iyadoo la yareynayo baabuurka hal qof wado ee soo galka iyo ka baxa Galbeedka Seattle.
Dhiirrigeli, taageer, oo kordhi isticmaalka fursadaha gaadiidka gudaha iyo dibadda iyo hareeraha Galbeedka magaalada Seattle.
Taageerada bulshooyinka ay saamaysay ciriiriga taraafikada ee la xidhiidha leexashada iyada oo loo marayo kabitaanka dhaqdhaqaaqa iyo taageerada.
Afafkee ayaa la taageeraa?
Barnaamijka Ikhtiyaarka Safarka ee Galbeedka Seattle waxa lagu heli karaa sagaal luqadood (Ingiriis, Isbaanish, Soomaali, Oromo, Fiyatnaamiis, Shiine la Fududeeyay, Shiine dhaqameed, Kuuriyaan, Khmer).
Xaggee dadku aadi karaan macluumaad guud?
Si aad u sahamiso dookhyadaada safarka, ka eeg ilaha weyn ee boggaga Xulashada Safarka Galbeedka Seattle.
Ololaha Baddel Safarkaaga (Flip Your Trip)
Waa maxay barnaamijka Baddel Safarkaaga?
Barnaamijka Baddel Safarkaaga (The Flip Your Trip campaign) wuxuu ku dhiirigeliyaa dadka inay go’aansadaan inay ku beddelaan safarrada baabuurta dookhyada kale ee safarka ee iyaga u shaqeeya, sida taraafikada, daba-galka, baaskiil wadida, mootada, joogitaanka xaafadda, ama wadista saacadaha aan ugu wacnayn. Ololaha waxaa ku jira qalabyo taageero oo kala duwan, oo ay ku jiraan:
$25 raacitaanka gaadiidka bilaashka ah si loo bilaabo
Bisha ugu horeysa oo bilaash ah basaska + galka buundada hoose ee basaska
Caawinta qorsheynta safarka
Cusboonaysiinta ololaha iyo dallacaad cusub
Dhacdooyinka gaarka ah
Sidee dadku isku qoraan?
Aad FlipYourTrip.org halkaas oo aad iska diiwaangelin karto adiga oo buuxinaya foom fudud si aad u xaqiijiso u-qalmitaankaaga (ku noolow ama ka shaqeyso West Seattle, South Park, ama Georgetown) oo aad ballan ku qaaddo inaad ugu yaraan hal baabuur-keli ah ku beddesho ikhtiyaar kale.
Isdiiwaangelinta ka dib, waxa aad heli doontaa iimaylka soo dhawaynta leh oo leh koodka martiqaadka gaarka ah iyo macluumaadka ku saabsan gelitaanka gunnadaada is-diiwaangelinta ee $25 ee safarrada bilaashka ah ee gaadiidka, tagsiga biyaha, iyo mootooyinka elektaroonigga ah. Tan waxaa ku jira labada tilmaamood ee gelitaanka raacitaanka bilaashka ah ee Metro Transit GO Ticket app ee isticmaaleyaasha taleefannada casriga ah iyo ikhtiyaarka kaadhka ORCA ee dadka aan lahayn taleefannada casriga ah.
Muxuu ololuhu u isticmaalayaa app?
Ololaha safarkaaga baddel waxa uu isticmaalayaa madalka Metro Transit GO Ticket ah sababtoo ah appka waxa ku jira qaab abaal marin ah oo dhibco ku kordhinaya akoonkaaga mar kasta oo aad u isticmaasho safarka gaadiidka, ay ku jirto isticmaalka safaradaada bilaashka ah. Dhab ahaantii, safarkaaga gaadiidka ugu horreeya ee app-ka wuxuu ku heli doonaa $5 dheeraad ah safarrada bilaashka ah. App-ka Transit GO waxa kale oo uu noo ogolaadaa in aan ku bixino raacitaanka bilaashka ah ee wada-hawlgalayaasha wadaaga mootooyinka maxalliga ah, Lime, Link, Spin, iyo Wheels. Haddii aad wax dhib ah kala kulanto isticmaalka abka, hagahayaga tallaabo-tallaabo ayaa kugu caawin kara habka dejinta abka iyo soo furashada dhibcahaaga fuulista. Loo heli karo Android ama iOS/iPhone.
Sideen ku heli karaa raacitaankayga bilaashka ah ee abka?
Transit GO waxay u isticmaashaa dhibco ahaan lacag ahaan oo ay raacayaashu ku soo furtaan raacitaanka. Marka, $25 aad ku jirto raacitaanka bilaashka ah waxay ka soo muuqan doontaa abka sida 2500 dhibcood ee astaanta Abaalmarinta ee app-ka oo aad isticmaali karto si aad u “iibsato” fuulitaanka. Hagahayaga tallaabo-tallaabo ayaa kugu caawin kara habkan.
Maxaa dhacaya haddii aanan haysan taleefan casriga ah ama qorshaha xogta?
Haddii aadan haysan taleefan casriga ah ama qorshe xog, fadlan iimayl u dir info@FlipYourTrip.org si aad u hesho kaarka ORCA cusub oo uu ku raran yahay $25.
Haddii aan hore u haystay Kaarka ORCA, miyaan ku heli karaa $25 lagu shubo kaarka ORCA ee jira?
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaad jeceshahay kaarka ORCA! Si kastaba ha ahaatee, ma awoodno inaan lacag ku shubno kaararka ORCA ee horey ujiray. Isticmaalayaasha telefoonka casriga ah, waxaanu kugu dhiirigelinaynaa inaad tijaabiso Transit GO app, adoo tixgelinaya inuu yahay qalab safar oo kale oo aad gacanta ku hayso. Haddii aadan haysan taleefan casriga ah ama qorshe xog, iimayl u dir info@FlipYourTrip.org si aad u codsato kaarka ORCA cusub oo uu ku raran yahay $25.
Sidee ayuu ololuhu u taageeraa bas raacida?
Waxaan ku taageereynaa bas raaacida dhowr siyaabood: bisha ugu horeysa waa bilaash, kuwa baska raaca waxay galaangal u leeyihiin buundada hoose, waxayna kaliya ku qaadaneysaa 2 fuushan si ay u bilaabaan bas cusub. Intaa waxaa dheer, raacayaashu waxay codsan karaan kabitaan wixii ka dambeeya bisha ugu horreysa, oo diiradda saareysa shaqaalaha ganacsiyada yaryar iyo kuwa aan faa’iido doonka ahayn. Si aad wax badan u barato, hubi macluumaadka West Seattle Travel Options. Si aad u aragto liisaska barkadaha ama barkadaha galbeedka Seattle ee jira, ka eeg RideshareOnline. Uma baahnid inaad isticmaasho barnaamijka Transit GO si aad u baska u raacdo.
Waa maxay sababta carruurta da’doodu ka yar tahay 18 sano aysan ugu qalmin barnaamijka Baddel Safarkaaga?
Barnaamijka Beddel Safarkaaga waxaa loogu talagalay dadka waaweyn 18 sano jir iyo ka weyn dhowr sababood dartood.
Dhalinyaradu waxay mar hore u qalmaan kabitaanka gaadiidka oo aad uga badan $25 ee la heli karo ololahan (eeg su’aasha xigta si aad u hesho macluumaad dheeraad ah).
Waxaan rabnaa inaan ka ilaalino dhalinyarada iyo kuwa kale khatarta jireedka, sharci iyo maaliyadeedba. Beddel Safarkaaga Raacitaanka bilaashka ah waxaa ka mid ah shirkadaha e-scooter-ka ee maxalli ah oo ay heli karaan dadka waaweyn ee jira 18 sano iyo wixii ka weyn.
Waa maxay noocyada taageerada gaadiidka ee diyaar u ah dhalinyarada?
Dhammaan ardayda dugsiyada dhexe iyo sare ee Seattle waxay u qalmaan Fursada ORCA ee Dhalanyarada oo bilaash ah oo aan xadidnayn. Ardayda Kulliyada South Seattle waxay u qalmaan kaarka ORCA ee ardayga si qoto dheer loo dhimay, iyo dhammaan ardayda barnaamijka Promise Scholars Seattle waxay xaq u leeyihiin kaarka ORCA oo si buuxda loo kabo. Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa ardayda siiya kaararka ORCA qaar badana waxay habeeyaan Baabuurka la walaagaayo macluumaad dheeraad ah ka eeg dugsigaaga. Haddii kuwaan midkoodna uusan khuseyn kiiskaaga, dhammaan dhalinyarada da’doodu u dhaxayso 6 – 18 waxay u qalmaan qiimo dhimis qoto dheer iyagoo isticmaalaya kaararka ORCA Youth. Carruurta da’doodu tahay 5 iyo wixii ka hooseeya waa u bilaash inay raacaan.
Ciladaynta iyo kasaaristeeda
Waxaan isku diiwaan geliyay barnaamijka Beddel Safarkaaga laakiin ma helin iimayl soo dhawayn ah ama kood martiqaad ah.
Waa inaad ku heshaa iimayl soo dhawayn ah 45 daqiiqo gudahood markaad buuxiso foomka Is-diiwaangelinta. Marka hore, ka hubi xaashida spamka ama boostada Junk si aad u hesho iimaylka mawduuca “Ku Soo Dhawoow Si aad Safarkaaga u Beddesho” ee “Doorashada Safarka Galbeedka Seattle.” Haddii aadan weli heli karin, fadlan noogu soo dir iimayl ahaan info@FlipYourTrip.org waxaanan dib kuugu soo diri karnaa koodkaaga.
Koodhka martiqaadka ee iimaylkayga soo dhawayntu ma shaqaynayo.
Waxaan ogaanay in qaar ka mid ah summada martiqaadka ay yihiin kuwo jahawareersan sababtoo ah waxay ka kooban yihiin xarfo u eg, sida
“I” wayn ama “L” yar
“O” wayne iyo nambarka “0”
“S” wayn ama nambarka “5”
Haddii ay tani ku khusayso, fadlan isku day Koodhka martiqaadka labada siyaabood. Haddii taasi wali shaqayn waydo, iimayl noogu soo dir info@FlipYourTrip.org.
Hagaha Tallaabo Talaabada ah
Guji si aad boga cusub ugu hesho Hagaha Tallaabo-tallaabada ah ee PDF ka